allsanaag.com - Qabyaaladii Xasan Culusoow oo soo if baxday
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3211	Days	01	Hour	22	Minutes	19	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Qabyaaladii Xasan Culusoow oo soo if baxday
Written by khalid	(Daawo) Shirkii Maamul usamaynta Jubaland oo dib udhac ku yimid iyo Madaxweynaha Soomaliya Xasan Culusoow oo aan ka soo jawaabin warqadihii loo diray oo lagu casumay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Culays weyn ka haysto Beeshiisa oo diidan in maamul loo sameeyo Jubooyinka ayaa dhegaha ka cufaystay waqadihii iyo casumaadii loo diray in uu ka soo qayb galo maamul u samaynta Gobolada Jubooyinka.
Gudiga qabanqaabada shirweynaha oo maanta shir jaraaid ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa xaqiijiyay dib u dhaca kuyimid shirka.